Soomaaliya waa beec ee imisaa lagu iibinayaa? – Puntland Voice
Soomaaliya waa beec ee imisaa lagu iibinayaa?
July 23, 2013 11:14 am Views: 28
Qof kasta oo aqrista ciwaankaan waxaa dhici karta in uu la yaabo oo is yiraahdo toloow maxuu qoraagu ula jeedaa ciwaaankaan. Laakiin xaqiiqda dhabta ah Dalkeenii hooyo waa iib ama Beec hadba kii aad isticmashid.
Waxaa la yiri maayd yaa u danbeeyey , saa la yiri kaa la sii sido. Inagoon meel kale ka doon doonin jawaabta wadankeenu waa Bad iyo Biri. Waxaan leenahay xeebta Africa ugu dheer, Allhamdulilah Ilahaay ayaa na siiyeey laakiin dadka Soomaaliyeed waay ku shukrin waayeen Nimcada Alle ku manaaystey. Baddeena khaayradka ku jiraa waa uu ka badan yahay dadka Soomaaliyeed oo dhan. Laakiin Nasiib daro dadka Soomaaliyeed aqoon ma leh, dhulkii (birigii) baay ku heshiin waayeen oo aaysan aqoon u lahaayn si loo munaafacsado Baddna iyada bal Hadalkeedaba daah.
Dowladdii KMG ee uu mdaxweeynaha ka ahaa Sheikh Sh Ahmed ayaa noqotey Dowlad Soomaaliyeed tii ugu horeeysey oo gasha heshiis Noocaan oo kale ah oo (muran lagu galinayo Xudduudaha Dalka Soomaaliyeed) .
Heshiiskaan waxuu yimi ka dib markii aay Dowladda Kenya heshiisyo hoose la gashay Dalal aay ka mid yihiin Dalka Norway. Norway iyo dalal kale oo badan ayaa shidaal iyo macdan ka baarayey Biyaha Soomaaliya intaay Soomaaliya Dowlad la’aanta ahaayd taas oo aay ka faaidaysteen Dowladaha dariska la ah Soomaaliya oo Kenya ugu horaayso. Shirkadahaays ayaa markaay ogaadeen in aaysan Kenya lahaayn dalka aay shidaalka ka baarayaan waxaay bilaabeen olole xoogaan oo aay ku doonayaan in aay Biyaha Soomaaliya qaayb ka mid ah hoos geeyaan dalka Kenya.
Tani waxaay u suurta gashay markii Dowlada Soomaaliya u saxiixday Kenya Heshiiskii is AF-GARAD oo muran gelinaya Xuddudka Badda Soomaaliya.Waxaa heshiiskii is AF_GARAD laalay bishii acotober 2011 , waxba kama jiraanna ka dhigay (NULL& AVOID) Baarlamaankii Soomaaliya ee KMG ahaa oo heshiis kaas si Geesinimo iyo wadaninimo ku jirto uga hor tagey. Qaramada midoobey ayaa tageertay go’aankii baarlamaanka Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed intooda badan waxaay ka fekeraan qabyaalad uun ee maawquf sii dheer ma leh. Soomaalida intooda badan waxaan ku qiyaasay dad indhoolayaal ah oo god-dheer oo mudgi ah ku jira. Hadii qof indhool ah god dheer oo mugdi ah lagu rido ma ka bixi kara? Jawaabtu waa maya. Soomaalidu waxaay ku jirtaa god-dheer oo mugdi ah. Waxaa ka luntay damiirtii wadaninimo iyo tii dadnimo. Dadnimo ma leh oo ma aaminsana in aay iyagoo Soomaali ah wax qabsan karaan . Kuli waxaay wax ka sugayaan nin asaagood ah oo shisheeye ah in uu u taliyo waxaay cuni lahaayeena siiyo.
Damiir ma leh oo wax wadaninimo ah kuma jirto. Damiir-laawe kasta oo hunguri xun rabana in uu dalka iyo dadka lacag dhaafsiisado waxaa hor boodaya koox (qabiil), kuwaas oo xaq iyo xaqdaraba ku garab-taagan. Shacabka Soomaaliyeed intooda badan waxaa dalkooda kala qiimo badan shaqsi waayo dadka Soomaaliyeed qabyalad baa indho tirtay. Inta shacabka Soomaaliyeed qareen (advocate) u yihiin damiir-laawayaasha Hunguriga xun wax xal ah lagama gaarayo arimaha Soomaaliya.. Waxaayna u badan tahay in Soomaalidu noqdaan sida Gypsy, sami ama kurdistanka.
Dad aan dal la ahaayn oo uduunka dhan la yaso. Ileen qofku dalkiisa buu qiimo , qaayo iyo sharaf ku leeyahaye. Waxa ugu yar oo aaynu ku faani jirney waa luuqadeena hooyo iyo dhaqankeena labadiiba waa la tirtirayaa. Waxaad ka garan kartaa dastuurkii Soomaaliya ayaa lagu qoray English iyo Turk luuqadeenii hooyana waa laga tirtiray soo markaays ma cada in aan nahay dad gadan oo waliba lagu raadinayo beec jaban. Hadii dastuurkii lagu qoray luuqado qalaad (shisheeye) see baay baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed u fahmayaan ileen Ingiriis iyo Turk midna ma nihine.